‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरीको दुवै मिर्गौला फेल , मलाई बचाउनु भन्दै हस्पिटलमै धरधररी रोइन ! – Taja Khawar
‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरीको दुवै मिर्गौला फेल , मलाई बचाउनु भन्दै हस्पिटलमै धरधररी रोइन !
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: ११:५९:३५
काठमाडौं : हास्य टेलिश्रृखंला ‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरी अर्थात कलाकार पल्पसा डंगोल अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।
मि’र्गौला सम्बन्धी स’मस्याका कारण उनी केही दिन अगाडि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएको कलाकार दीपाश्री निरौलाले जानकारी दिइन् । उनमा केही अगाडि मिर्गौला सम्बन्धि समस्यामा देखिएको थियो ।
सो समस्याका कारण उनी एक महिना अस्पताल भर्ना भएर केही दिन अगाडि मात्र घर फर्किएकी थिइन् । तर घर फर्के लगत्तै स्वास्थ्यमा फेरि सम’स्या देखिएकोले उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरि एको हो।
कलाकार दीपाश्रीका अनुसार उनले मिर्गौला समस्याका कारण केही समयदेखि डायोलोसिस गर्दै आएकी थिइन् । अहिले भने डायोलोसिस गर्न समेत समस्या परेकोले डाक्टरले उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दीपाले पल्पसाको अवस्थाको बारेमा आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकबाट समेत सार्वजनिक गरेकी छन् । जसमा उनले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न र सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेकी छन् ।
विगत १३ वर्षदेखि नियमित रुपमा ‘मेरी बास्सै’ अभिनय गर्दै आएकी उनले अन्य केही सिरियल, म्युजिक भिडिया लगायत अभिनय निर्देशन समेत गरेकी छन् । उनकै निर्देशन अभिनय रहेको सिआइडी सिरियल ‘दृष्टि’ समेत दर्शकले रुचाएका थिए ।
केहि दिन अगाडी आफ्नो स्वरमा नयाँ गीत ‘काली काली दिलवाली…’ बजारमा ल्याएकी थिइन्। दुबईको विभिन्न रमणीय स्थलमा छायाँकन गरिएको यो गीतको भिडियोमा पल्पसा आफैंले अभिनय गरेकी थिइन्।
उनले यो गीतमा आफूले यात्रा गर्दाका दृश्यलाई समेटेर यात्राप्रधान म्युजिक भिडियोको रुपमा बनाएकी छिन्। यो भिडियोलाई पल्पसा आफैंले निर्देशन गरेकी हुन्। जसमा रविन भट्ट र अशोक चौधरीको सम्पादन रहेको छ।
काठमाडौं । सत्ता परिवर्तन सँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सक्रिय देखिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लव शान्त नै थिए ।
तर, सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै उनको राजनीतिक सक्रियता बढ्न थालेको छ । सरकार परिवर्तन भएको भोलिपल्टै महासचिव विप्लवले पुराना सहयात्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई भेट्न खुमलटार नै पुगेका थिए ।
बुधबार उनले प्रचण्डसँगको भेटमा आफ्ना बन्दी कार्यकर्ताहरुलाई रिहाइ गर्नुका साथै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् ।
यस्तै, आज उनै विप्लव नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न नेपाल निवास कोटेश्वरमै पुगेका छन् । बिहीबार विहानै विप्लव नेपाल निवासमा पुगेका थिए ।
विप्लव र नेपालबीच भेट हुँदे गर्दा प्रचण्ड पनि त्यहाँ आइपुगे । तीन नेताबीच पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, आगामी कार्यदिशा र पार्टी एकताका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा भनिए पनि उनीहरुबीच के–कस्तो विषयमा छलफल भयो भन्ने जानकारी गराइएको छैन । उनले अहिले शत्तापक्षसँग आफ्ना कार्यकर्ताहरुको रिहाइको माग गरेका छन् ।
यस्तै, बुधबार प्रचण्डसँगको भेटमा पुराना सहयात्रीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । अर्थात् उनले माओवादी एकताको विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेका विप्लवले उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बदलिएको परिस्थितिमा एकाएक राजनीतिक भेटभाटमा सक्रिए भएका वि
Last Updated on: July 18th, 2021 at 11:59 am